वाम नेता व्यवस्थापन गर्न सकस,कसको आँखा कता ? – ejhajhalko.com
वाम नेता व्यवस्थापन गर्न सकस,कसको आँखा कता ?
१७ पुष २०७४, सोमबार ०३:२२ 232 पटक हेरिएको
सम्मानजनक एकताका लागि नेतृत्वको पदीय व्यवस्थापनको प्रश्नलाई दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दबाब रूपमा उठाएका कारण पनि गठबन्धनका दुवै अध्यक्ष थप दबाबमा छन् ।,समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले लेखेको छ ।
ओली-दाहालको पदीय व्यवस्थापनसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र नेपालको पदीय व्यवस्थापनमा पनि गठबन्धनलाई चुनौती छ । खनालले मिडियामार्फत राष्ट्रपति बन्ने चाहना राख्न थालेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंले पनि आफू छोटो समय मात्रै राष्ट्रपति भएकाले पुनः दोहोर्‍याइदिन गठबन्धनका नेतासँग लबिङ थालेकी छन् । भण्डारी नै राष्ट्रपति दोहोरिए माओवादीलाई पनि उपराष्ट्रपति दोहोर्‍याउन दबाब पर्नेछ ।